ကျောင်းတက်လာကြ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ – ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျောင်းတက်လာကြ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ – ၁
ကျောင်းတက်လာကြ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ – ၁
Posted by တောတွင်းပျော် on Jun 25, 2017 in Creative Writing | 24 comments
ကျောင်းဖွင့် ရာသီ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်း သွားလာနေတာတွေ့ ရတော့ 
ခုခေတ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ကျောင်းတက်သွားလာရတာ အဆင်ပြေလာကို တွေ့ ရတော့ 
နယ်က ကျောင်းလာတက်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရလာပြန်တယ်။
ခုတောတွင်းပျော်နေတဲ့ဒေသက အရင်က အနက်ရောင်နယ်မြေ
ဒါမှမဟုတ် အညိုရောင် သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ရွာ။
ဟိုတုန်းက ကျေးရွာတွေတိုင်းမှာ စာသင်ကျောင်းရှိဖို့ ဆိုတာ
အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ နှစ်ရွာပေါင်း သုံးရွာပေါင်း ခနော်ခနဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆိုသလို။ ကျောင်းဆရာ/မ ဆိုတာကလည်း ရှားတယ်။ ဟိုတုန်းကများဆို ၈ တန်းအောင်
ရွာခန့်ဆရာ/မတွေ ရဖို့ တောင် အနိုင်နိုင်။
မိဘတွေဆိုတာကလည်း စာမတတ်တာတွေများတော့သားသမီး
ကျောင်းထားတာတောင်မှ သူများထားလို့လိုက်ထားရတဲ့ပုံစံလို
ဖြစ်နေတာ။ ဒီကြားထဲက အမျှော်အမြင်ကြီးမားတဲ့မိဘတစ်ချို့ တလေကသာ သားသမီးတွေကို ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ အဖြစ်က ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကျောင်းထားပေးကြတာ။
ဟိုတုန်းကဆိုတာ ခေတ်အခြေအနေကြီးက ကောင်းလှတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ အစိုးရတပ်တွေနဲ့ဒေသခံလက်နက်ကိုင်တွေ တချိန်လုံး
ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်။ အမြဲတမ်း ရင်တထိတ်ထိတ်
နေရတဲ့ ခေတ်။ အဲဒီခေတ် အဲဒီအခါအချိန်က ကျနော်တို့ ဒေသဖက်က ၁၀ တန်းအောင်ကျောင်းသားဆိုတာ လက် ၅ ချောင်း ပြည့် အောင်တောင် ရေတွက်ဖို့ မရှိ။
ခုနောက်ပိုင်း KNU နဲ့မြန်မာစစ်တပ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးချိန်မှာတော့ကျနော်တို့ဒေသတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း အသီးအပွင့် အဖြစ် အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားတယ်။
ဘယ်တုန်းကမှ ကားလမ်းပေါက်လာလိမ့် မယ်လို့မမျှော်လင့် ဝံ့ ခဲ့ တဲ့ ရွာတွေ ခုဆို ကားကြီးကားငယ် အကုန်ရောက်ကုန်ပြီ။
ဆေးပေးခန်းတွေ စာသင်ကျောင်းတွေရှိကုန်ပြီ။ တချို့ ရွာက စာသင်ကျောင်းတွေဆို KNU က ဦးစီးဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံခြားအလှူတွေနဲ့ဆောက်တဲ့ခမ်းခမ်းနားနား စာသင်ကျောင်းကြီးတွေ။ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ အစိုးရဖက်က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။
နယ်မြေအေးချမ်းသွားတော့KNU ဖက်ကနေလည်း ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ အရင်ကထက်ပိုပြီး အလေးပေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လာတာကို တွေ့ ရတယ်။
ခုဆို ဟိုအတွင်းပိုင်းကျတဲ့ ရွာတွေမှာမြင်တွေ့ နေရတာက
အိမ်ကြီးအိမ်မတွေသာ နေလို့ ရရုံသာဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေ ရေလောင်းအိမ်သာကို အထူးအလေးပေးဆောက်နေကြတာ
ဟိုတုန်းက ပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့ သလောက် ခုနောက်ပိုင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာတဲ့ နောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေလည်း တိုးလာကြတယ်။
ကျေးရွာတိုင်းမှာလည်း အိမ်တိုင်ယာအရောက် ရေပိုက်တွေ သွယ်လာနိုင်ကြတယ်။
ဒါတွေက သိပ်မကြာသေးတဲ့နှစ်ကာလအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ကျနော်တို့ ဖက်က မြင်ကွင်းတွေပါ။
တောတွင်းပျော်ငယ်ဘဝဟာ ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းက မတူပီ ဆိုတဲ့ မြို့ ကလေးကနေ ကြီးပြင်းလာခဲ့ တာ။
မတူပီမြို့ ဟာ တောင်ကုန်းတောင်တန်းပေါ် ခွအုပ်တည်ထားပြီး
မြို့ ထဲမှာ လမ်း ရှစ် လမ်းဆုံတဲ့လမ်းဆုံရှိနေတာကလည်း ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့ ။
တောတွင်းပျော်တို့နေခဲ့ တဲ့ တုန်းက မတူပီနဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ မင်းတပ်မြို့ ဟာ ၁၀၂ မိုင် ဝေးပြီး မိုးတွင်းဆို လနဲ့ချီသွားရတဲ့လမ်းမျိုး။
ဒီအချိန်တုန်းက အောင်ဆန်းသူရိယ ဦးတိုက်ချွန်းကြီး သက်ရှိထင်ရှား
မိုးတွင်းဆို မှိုင်းခိုးတွေ သိပ်သိပ်သည်းသည်းဝေ စိုစွတ်နေတတ်သလောက် နွေရောက်ရင် တိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့ 
ဒီအကြောင်းတွေ အစဖော်ပြန်ရေးမိပြန်တော့ငယ်ငယ်က
မြို့ ကလေး တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ အမြဲ လှမ်းမျှော်ကြည့် မိခဲ့ 
ဒီရေတံခွနကြီးဟာ လေးမြို့ မြစ်ရဲ့ အစ။
ကျနော်နေခဲ့ ချိန် အစပိုင်းလောက်က မတူပီမြို့ နယ်တစ်ခုလုံးမှာ
ဒီတစ်မြို့ နယ်လုံးက အထကကျောင်းသားတွေဟာ မတူပီမြို့ ကို ခြေကျင်လာပြီး ကျောင်းလာတက်ကြရတာ။
တချို့ ကျောင်းသားတွေဆို မိုင် ၅၀/ ၆၀ ရပ်ဝေးလောက်နေ လာတက်ကြတယ်။ အနီးဆုံးရွာဖြစ်တဲ့ဖနိုင်ရွာ ငလိုင်ရွာတောင်မှ
၈ မိုင် ၉ မိုင်ခရီး။
ဒီမြို့ ကလေးရဲ့မိုးဦးကျောင်းစဖွင့် ချိန်မှာ ကျောင်းသားပြည့် ပြည့် စုံစုံဆိုတာ တစ်ခါမှမရှိ။ တစ်နှစ်တာ ကျောင်းဖွင့် ချိန်
တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းနဲ့သောကြာနေ့ညနေပိုင်းလည်း ရပ်ဝေးကျောင်းသားတွေ မစုံနိုင်။
ဇွန်လကျောင်းဖွင့် ချိန်မတိုင်ခင် မေလလယ်လောက်ကစပြီး ရပ်ဝေးကျောင်းသားတွေ မတူပီမြို့ ကိုရောက်လာကြပါပြီ။ တချို့ က
အများစုက အထကကျောင်း ပရဝုဏ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းစောင်းပေါ်မှာ ကျောင်းတက်စဉ်ကာလအတွင်းမှာ
နေထိုင်ဖို့တဲကလေးတွေဆောက်ဖို့ ။
ကျောင်းမှာ အဆောင်ဘော်ဒါရှိသလားဆိုတော့ရှိပါတယ်။
ပုံစံ ၃၁ ဖောင်အဖြည့် မှားလို့ဝန်ထမ်းဘဝကပြုတ်ပြီး ကျောင်းဆရာ/မဖက်ကို ဝင်လာတဲ့မြေပြန့် က ဆရာမတွေ အဓိကနေတာပါ။
သူတို့ တဲဆောက်ရတဲ့အလုပ်ဟာ အင်မတန်ပင်ပန်းပါတယ်။
မြို့ ပေါ်ကနေ ဖြတ်လမ်း ၃ မိုင်လောက် ဇောက်ဆင်းရတဲ့လေးမြို့ချောင်းဘေးကနေ ဝါးတွေခုတ် ထမ်းတင်။ တစ်နေ့၂ ခေါက် ၃ ခေါက် အတက်အဆင်းလုပ်ထမ်းရတာ။
နောက် သက်ငယ်(သက်ကယ်) ရိတ်။ အစပိုင်းမှာ ရွာက ညီအကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလာကူနိုင်ကြပေမယ့် 
မိုးဦးကျချိန်မှာတော့တောင်ယာအလုပ်တွေပြန်လုပ်ကြမှာမို့ 
အချိန်ပြည့်မကူညီနိုင်။
တချို့ က ကျောင်းစဖွင့် ချိန်အထိတိုင် တဲထိုးမပြီးသေး။ ဒါဆို ညနေကျောင်းဆင်းပြီးချိန် လေးမြို့ ချောင်းကို ပြေးဆင်း ဝါးတစ်ခေါက်စာ ခုတ်ထမ်းတက်လာ။
အဲဒီအချိန်က နယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘဝဟာ
အသက်ရှုအမောဆို့ လောက်အောင်ကို ပင်ပန်းလှပါတယ်။
ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက ခုခေတ်လို ပလတ်စတစ်တွေ ပေါပေါများများမရှိသေးတော့ရေခပ်ရေသယ်ရတဲ့နေရာမှာလည်း ဗူးခါးခြောက်ဘူးတွေ သုံးကြရတယ်။ ဒီဗူးခွံတွေက အထိအခိုက်မခံနိုင်တာမို့အတော်ဂရုစိုက်ပြီး ထိန်းသိမ်းရတာ။ ရဖို့ ကလည်းမလွယ်။ ထိမိခိုက်မိလို့ကွဲသွားပြီဆိုရင်လည်း သူတို့ အတွက် အတော် ဒုက္ခများတာ။
အဲဒီအချိန်ကာလက မတူပီမြို့ ဟာ ဆောင်းရောက်လာပြီဆို ရေခက်ခဲလာတာမို့ ။ ရသလောက်ရေကို ရှိသလောက် ဘူးတွေနဲ့ 
တချို့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ရွာ ခရီးအလှမ်းဝေးလွန်းတော့သောကြာနေ့မွန်းလွဲကျောင်းမတက်ဘဲ ရွာကိုပြန်ကြပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေရဲ့ရွာနာမည်တွေကို မှတ်ပြီး ဆရာတွေက ခွင့် ပေးရပါတယ်။ မပေးလို့ မရ။
တစ်ချို့ က ရွာပြန်ရောက်ဖို့ အရေး လမ်းမှာ တစ်ညအိပ်သွားတယ်။
ရွာရောက်တော့ လည်း မနားအား …
နောက်တစ်ပတ်စာ နှစ်ပတ်စာ ရိက္ခာ ဆန် ကျောက်ဖရုံ ရွှေဖရုံ
မျောက်ဥ စတာတွေစု။ ပြီးတာနဲ့ပြန်လှည့် လာ။
မတူပီကို ပြန်ရောက်တော့တနင်္လာနေ့မနက်ကျောင်းတက်ချိန်
ခရီးဝေးလွန်းတော့ရိက္ခာလည်းများများမထမ်းနိုင်။
သူတို့ က မထမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ဆန်အိတ်ကြီးတစ်အိပ်စာလောက်တော့ထမ်းသွားကြတာပါပဲ။
၉ တန်း ၁၀ တန်း အရွယ်တွေဆိုပေမယ့်အရမ်းသန်မာကြတယ်။
တောင်ပေါ်ဒေသဆိုတော့လမ်းဟူသမျှက အတက်အဆင်းတွေချည်း။ သူတို့ ကတော့နေ့ ဝက်လောက် အတက်အဆင်းလမ်းမှာ မနားတမ်းလျှောက်နိုင်ကြတွေပါ။
တစ်ချို့ ကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလမှာ ဆုံးသွားလို့ရပ်ဝေးနယ်ဝေး ဆွေမျိုးညာတိတွေဝေးမို့အနီးအနားဘော်ဒါတဲက ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းဆရာတစ်ချို့ 
အသုဘရွာပြန်ပို့ ရတာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ အိမ်ကို အချိန်မှီ
ပြန်အကြောင်းမကြားပေးနိုင်တာမို့ဘော်ဒါနီးချင်း ဆွေမျိုးရင်း
ဟိုတုန်းက တောင်ပေါ်နယ်ကျောင်းသားဘဝနဲ့ပတ်သက်တာတွေ
ရေးချင်တာတွေ အများကြီးရှိနေပေမယ့်ဒီလောက်ပါပဲ။
ခုခေတ်ကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမြင်မိတော့ 
ငယ်ငယ်က နယ်ကကျောင်းတက်လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို
မြင်ယောင်အမှတ်ရစိတ်နဲ့….
နိုင်ငံခြားအလှူရှင်တွေနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်း
ပထမပြောချင်တာက ငြိမ်းချမ်းချင်းဆိုတာပဲ …
စစ်ပွဲဆိုတာ ကောင်းကျိုးမပေး ၊ ၂-ဘက်လုံးလည်း သေကြေ ကျိုးကန်း…
ကြားက အရပ်သားတွေခမြာလည်း မြေဇာပင်ဖြစ် ၊ ပေါ်တာကလည်း အဆစ် …
အခုလို ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်တာ မင်္ဂလာရှိပါ့ဗျား …
ချင်းတိုင်းရင်းသား ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်ဗျ…
ဆောင်းတွင်းဘက်ဆို ချင်းတောင်မှာ အေးလွန်းလို့ စာသင်နေရင်း ဖယောင်းတိုင်နဲ့ လက်ချောင်းတွေနွေးအောင် မီးကင်ရသတဲ့ ။ တစ်ခု ခြီးကျူးဖို့ကောင်းတာက တစ်ယောက်ကောင်းစားရင် တစ်ဆွေမျိုးလုံး တစ်ရွာလုံးကို ပြန်လှည့်ကြည့်တာပဲ …
ငြိမ်းချမ်းခြင်းအကျိုးကတော့ကျနော် လက်တွေ့ သိခဲ့ ရပါတယ်။
၉၇/ ၉၈ ဝန်းကျင် ကျနော်တို့ နယ်ဖက် စစ်ကောက်တော့လူငယ်အတော်များများ
ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုင်းဖက်ရောက်လိုက် မလေးဖက်ရောက်လိုက်
နှစ်အကြာကြီး အိမ်မပြန်နိုင်ခဲ့ ဘူး။
ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကော မြောက်ပိုင်းမှာပါ နေဖူးခဲ့ တယ်။
ဆောင်းတွင်းဆို ရေငွေ့ မပါ အေးစက်နေပြီး အရေပြားတွေ
ခြေဖဝါးတွေအနားသားတွေ အက်ကွဲတဲ့ အထိ အေးစက်တယ်။
အဆီနည်းတဲ့ လူဆို ပိုခံရတယ်။
ညဆို စောင်ခြုံထားရင်း မီးဖိုနံဘေးမှာ စာဖတ်ရတယ်။ အအေးက ဘယ်လောက်ထိပြင်းသလဲဆို
မီးဖိုဖက်အခြမ်းက ကိုယ်က လောင်မတတ်ပူနေပေမယ့်တဖက်ခြမ်းက အေးစက်နေတယ်။
ဟိုဖက်လှည့်ဒီဖက်လှည့် ပြောင်းထိုင်နေရတာ။
ချင်းလူမျိုးတွေက သူတို့ ဒေသ သူတို့ လူမျိုးကို အရမ်းခင်တွယ်သံယောဇဉ်ကြီးကြတယ်။
ဘယ်အရပ်မှာပဲ ကွန်လွန်သေဆုံးတာဖြစ်စေ တတ်နိုင်ရင် တောင်ပေါ်က ဇာတိရွာဆီ
မရောက် ရောက်အောင်ပြန်သယ်ကြတယ်။ ဟိုတုန်းကတွေပေါ့ ။
ခုနောက်ပိုင်းနည်းသွာတယ်ဆိုပေမယ့်ရှိနေပါသေးတယ်။
ဥပမာ စင်ကာပူက အိမ်ဖော်မလေးအဖြစ်မျိုး။
နိုင်ငံခြားရောက်လို့တစ်ယောက်အဆင်ပြေရင် နောက်ကကျန်ခဲ့ တဲ့ညီအကို
မောင်နှမ မိဘ သူငယ်ချင်း စတာတွေ အဆင်ပြေသလို ခေါ်ထုတ်တယ်။
ကျနော်တွေ့ဖူးတဲ့ချင်းတွေကတော့ တစ်ယောက်ကောင်းစားရင် တစ်မျိုးလုံးကြည့်ဖို့နေနေသာသာ ကိုယ့်မိဘတောင် ကိုယ်ပြန်မကြည့်ကြဘူးဗျ မတိုးတက်တာ၊ ယဉ်ကျေးမှုမဖွံ့ဖြိုးတာ၊ ချို့တဲ့လိုက်ကြတာလဲလွန်ရော ချင်းလူမျိုးထဲကအောင်မြင်တိုးတက်သွားသူတွေကို အများကြီးလိုအပ်နေသေးတဲ့ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ့်ဒေသအတွက် စံပြတခုခုဖစ်စေချင်တယ်….
လူချင်းတူပေမဲ့ အသက်ရှုပုံချင်းကွဲတယ် …
ချင်းဖြစ်တာတူပေမဲ့ အမျိုးချစ်စိတ် ကွာမှာပေါ့ …
ဩစီနဲ့ အမေဂျီးကားမှာ ချင်းလူမျိုးတွေ မြို့တည်လို့ရတယ်…
ဟိုးအရင် … Guam တို့ Saipan တို့ကို US က ဖရီးဗီဇာဖွင့်ပေးချိန် ၊ လေယာဉ်တဝက်လောက်က ချင်းတွေချည်း ။ ရွာလိုက် ပြောင်းကြတယ်လို့တောင် ယုံမှားရတယ် …
ပိုစ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဟိုတုန်းက တောင်ပေါ်ကလူတွေ ပညာသင်သွားရတဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းတွေပါ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ငံခြားထွက်တဲ့အကြောင်းဖက်ကိုရောက်သွားရော ….
ထွက်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အတော်များများထဲက တစ်ခုက မြန်မာပြည်ထဲ နေမပျော်တာလည်းပါတယ်။
ဦးကျောက်ကြားဖူးမလား ဟိုတုန်းက ဘူမိပုံပြင်လေးတစ်ခု။
Vun Suan ဝုန်ဆွမ် ဆိုတဲ့တီးတိန်နယ်သား ချင်းလူမျိုးတစ်ယောက် ဂျာမနီမှာ ကျောင်းတက်တယ်။ အလုပ် လုပ်တယ်။ဟိုမှာ ဂျာမနီသူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်။
ဒါပေမယ့်မြန်မာပြည်ကို ချစ်စိတ်နဲ့သူ့ မိသားစုနဲ့ ပြန်လာပြီး သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။
တခါတော့သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် ဂျာမနီက ပါရဂူနှစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။
အဲဒီနှစ်ယောက်က ဝုန်ဆွမ်ကိုတွေ့ တော့ဝန်ကြီးဋ္ဌာနကိုပြောတယ်။
ဒီမှာ သူတို့ ရဲ့ ဆရာအရင်းခေါက်ခေါက် မစ္စတာဝုန်ဆွမ်ရှိနေတာ သူတို့ ကို ငှားဖို့လိုသေးလားတဲ့ ။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ဝုန်ဆွမ်ဟာ သူ့ မိသားစုကို ဂျာမနီ အရင်ပြန်ပို့ ။ နောက်မှ သူလည်း ဂျာမနီကို အပြီးအပိုင်ထွက်သွားတော့ တယ်။
သူ့ ရဲ့ နာကျဉ်းမှုဟာ ဘယ်လောက်တောင်ပြင်းထန်ခဲ့ သလဲဆိုရင် ၈၈ နောက်ပိုင်း နယ်စပ်တစ်နေရာမှာ သူ အထောက်အပံ့ ပေးတဲ့ 
အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ တယ်။
ဦးဝုန်ဆွမ် ဆုံးသွားတာ သိပ်မကြာလှသေးပါဘူး။
ကိုရင်တော အသက်ဖြည်းဖြည်းရှု …
လူဆိုတာ “ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ” ရွှေ့ကြသူတွေချည်း…
ဘယ်သူ့ကိုမှ အတိုက်အခံ အပြစ်ပြောစရာမရှိ …
ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်သာသိ ၊ မြေပြန့်ကလူ တောင်ပေါ်တင်ရင် ဂန့်မှာ…
စနစ်ဟောင်းအကြောင်း စာဖွဲ့ရင်တော့ မဆုံးနိုင် …
မတိုးတက်တာ ယဉ်ကျေးမှုမဖွံ့ ဖြိုးတာ ချို့ တဲ့ တာတွေက
အပြစ်တင်စရာ တစ်ခုလိုဖြစ်နေရောလား …
တကယ့် လက်တွေ့ဘဝကို အတွင်းကျကျမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါ။
ဒီလိုမျိုးမှ သဘောမထားနိုင်ရင် လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးက ဘယ်အချိန်မှ ကုန်ဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ပေ ၄၀၀၀ ကနေ ၆၀၀၀ ကျော်အတွင်း မြေပြန့် လုံးဝမရှိတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်
နေထိုင်မှုအခက်အခဲတွေကို ဒေသခံတွေကလွဲပြီး အပြင်လူတွေက သိပ်သိမှာမဟုတ်ဘူး။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့်တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေ တစ်နိုင်ငံလုံး ဒီလိုဖြစ်ရမယ် သတ်မှတ်လို့ မရသလို
ဒီမျိုးနွယ် ဒီမျိုးရိုးကြောင့်ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲ ပဲဖြစ်ရမယ်လို့တရားသေမှတ်ယူလို့ မရပါဘူး။
မတူတဲ့လူမျိုးစုတိုင်းမှာ သူ့ တို့ ဘာသာ သီးခြားဓလေ့ တွေရှိတယ်။ ရိုးရာတွေရှိတယ်။ ဗီဇတွေရှိတယ်။
ကျနော်ကငယ်ငယ်ကတည်းက ချင်းပြည်မှာကြီးလာခဲ့ တာ။ အတော်များများထိတွေ့ ဆက်ဆံလာခဲ့ တာ။
ချင်းပြည်ဟာ ပညာတတ်မချို့ တဲ့ ပါဘူး။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မဆလခေတ်ကတည်းက ပညာတတ်တွေ နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားခဲ့ ကြတာ ..
ဒေသရဲ့ခက်ခဲမှုတစ်ခုတည်းတင်မကဘူး နိုင်ငံရေးနဲ့ လည်း အများကြီး ပတ်သက်နေပါတယ်။
အဆင်ပြေရင် ဆက်ရေးပါအုံးမယ် အန်တီ!
ချင်းပြည်ကနေ.. ကရင်ပြည်ဖက်ချည်း အတွေ့များနေသလားလို့..။
ဇာတိပြန်ဖြစ်ရင်.. အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့ ထင်ပါတယ်..။
ပြောလို့သာပြောတာ.. အမေရိကားမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသား တွေသောင်းချီ…။
ကမ္ဘာအနှံ့ဆို.. သန်းချီမယ်ထင်တယ်..။ မီဇိုရမ်ပြည်ကချင်းတွေပါ ထည့်တွက်မယ်ပေါ့..။
ကိုတောကို ကရင်လို့ ထင်တာ..
လုံမလေး အထင်က တစ်ဝက်တိတိ မှန်ပါတယ်
ဇာတိမြောက်ပိုင်းက။ အဲဒီဖက်တွေ မရောက်တာ ကြာလှပေါ့ ။
ဆိုပေမယ့်လူတွေက နိုင်ငံခြားထွက်နေကြတုန်း။ ဒါက နိုင်ငံရေးပထဝီနဲ့ လည်း
အများကြီးဆိုင်နေပါတယ်။ တချို့ ရွာတွေဆို ရွာတွေပျက်သွားလောက်တဲ့ အထိ
နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်အနေနဲ့တတိယနိုင်ငံထွက်ကုန်တာ။
ဟိုအရင် မဆလခေတ်ကတည်းက အမေရိကမှာ ရွာတည်နိုင်လောက်အောင် ထွက်သွားခဲ့ တဲ့ 
ရွာတွေရှိတယ်။ ဖလမ်းမြို့ နယ်က လုံဗန်ရွာဆိုရင် ဟိုကတည်းက အမေရိကကို ရွာတစ်ဝက်လောက် ရောက်သွားတယ်။
ဒေသရဲ့ခက်ခဲမှု မြေပြန့် အစိုးရရဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ 
ဟိုခေတ်တုန်းကတည်းက တတ်နိုင်တဲ့ လူတွေက အိန္ဒိယဖက်မှာကျောင်းတက်ကြပြီး အမေရိကကို
အဲ့နယ်က ကျောင်းသားလေးတွေ ပညာ ရှာ ကျောင်းတက်ရတာလည်း မလွယ်ပါ့လား။
အခုရော အရင်ထက် ပို လွယ်လာပြီလား။
လွယ်မှပဲ ဖြစ်မယ်။ တောနယ်တွေမှာ
သိပ် ဦးစားမပေးရတဲ့အထဲ ပညာရှာရ ခက်နေရင်ဖြင့်
နောက်တစ်ပိုင်း ဆက်ရေးအုံးမလားလို့ ပဲ
ချင်းပြည်နယ်က လူတော်တွေ ထွက်တယ်။
ချင်းလူမျိုး အထူးကု ဆရာဝန်တွေအများကြီး။
I Love Myanmar ချင်းမလေး လည်း နာမည်ကြီး။
ဒါပေမယ့် အများစုက ဆင်းရဲနေတယ်။
ရေကြီးမြေပြိုတဲ့ ဒဏ် ခံလိုက်ရတာ ပိုဆိုးတယ်။
စိုက်ပျိုးအတွက်က အခက်အခဲရှိတော့တတ်နိုင်သမျှပညာရေးပိုင်းမှာ
ဖြစ်ထွန်းအောင် အခက်အခဲအများကြီးကြားက သူများထက်
ကြားမိတာတော့ ချင်းပြည်နယ်မှာ အရွယ်ကောင်းလူငယ်တွေတော်တော်နည်းကုန်ပြီဆိုပဲ
ချင်းပြည်မှာ တောမထူတော့တောထူတဲ့ နေရာ ရွေ့ နေရတာလေ
စိတ်ထဲမှာ ဖွံဖြိုးမှုအနည်းဆုံးလို့ ထင်မိတာ.. ချင်းနဲ့ ကယား လို့ ထင်တာပဲ.. အဓိက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပေါ့.
ဒါပေမယ့် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွေရဲ့ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ ချင်းလူငယ်အများစု နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေကြတယ် ထင်တယ်..
မီးအိမ်ရှင်မလေး သီချင်းကို အရမ်းကြိုက်တယ်.. ချင်းတောင်တွေဘက်ကလည်း သွားလည်ချင်တယ်..
ချင်းတောင်က သက်နုကျောက်။ မိုးတွင်းဆို လမ်းတွေကပြိုပေါ့ ။
ဟိုတုန်းက တောင်ယာအားကိုးလို့ ရတယ်။
ခုတော့ခက်ခဲသွားပြီ။
အအေးကဲတဲ့ဒေသမို့ထင်းမီးသုံးရတာက တခြားဒေသထက်ပိုများတော့ 
ဆရာစောဘွဲ့ မှူး တီးတိန်ကိုလာတော့ 
သူတို့အသင်းတော် ( EBC ) ဧဝံဂေလိဘက်တစ်ချာခ်က အသင်းသူ
စောဘွဲ့ မှူးလာတော့ကျနော့ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ 
စောဘွဲ့ မှူးတပည့်စောစောမူး နာမည်ခံယူပြီး သူ့ ဆီမှာ ဂီတာတီးသင်ခဲ့ ကြသေးတယ်။
church မှာ စောဘွဲ့ မှူးက သင်တန်းအခမဲ့ဖွင့် ပေးတာကိုး
ချင်း ရိုးရာ ဟင်းတစ်ခွက်လောက် ချက်နည်းလေး ပြောပြပါညော်
ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသက ပြာရည်နဲ့ ချက်တဲ့ဟင်းအကြောင်း ကြားဖူးသလား
နောက်မှ ပြန်လာမန့် မယ်။ ခု မျက်စိ မခံနိုင်တော့ လို့ 
ပြာရည်နဲ့ချက်တဲ့ ဟင်းက မတူပီနယ် မီဇိုပြည်နယ် ( လုရှိုင်း ) ဖက်မှာ သုံးကြတယ်။
ကြော်ချက် ( လုံဘိန် ) ပြုတ်ချက် ( အမ်ပေါ့) ၂ မျိုးချက်ကြတယ်။
အထူးသဖြင့်ပဲရွက်တွေ အနူးကြာတဲ့အသားရွက်တွေမှာ ထည့် ရင် ခဏလေးနဲ့နူးပါတယ်။ ပဲရွက်တွေဆို နူးညံ့ သွားတာပဲ။
ဝက်သားချက်တဲ့ အထဲမှာ သုံးလိုက်ရင် ဝက်ခေါက်တွေ နူးသွားပြီး စားရတဲ့ အရသာ
အမ်ပေါ့ ဟင်းကြတော့ကရင် တာလဘောဟင်းလိုပါ။ သူကတော့ဆန်မလှော်ဘဲထည့် ပြီး ပြာရည်သင့် ရုံထည့် ပေးတာ။
လုရှိုင်းဖက်မှာ မီးဖိုမှာ မီးလှုံရင်း မတော်တဆ မီးဖိုထဲ တံတွေးထွေးမိရင် အလွန်စိတ်ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ ပြာကို သန့် သန့် ရှင်းရှင်းယူကြတယ်။
ပြာရည်ကို ဘီးစပ်ရွက်/ပင် ဝါးပင်တွေကို မီးရှို့ ပြာချပြီးယူရတာ။ ဝါးစိမ်းကို ပြာချရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်။
မြောက်ပိုင်းမှာက ဆာဘူးတီးဆိုတဲ့ပြောင်းဖူးပြုတ်။ သူကတော့အသားပြုတ်ရည်နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ချက်ထားတာ။
ပြောင်းဖူးဆိုတာက အစိုမဟုတ်ဘဲ အခြောက်ခံထားတဲ့အစေ့ တွေကိုမွှေးနေအောင်လှော် အခွဲကျွတ်အောင် ဆုံထဲထောင်းပြီး ဒန်အိုးထူထူ ( သူက သာမန်အိုးထက် အပူပိုပြင်းတယ် ) နဲ့တစ်ညလုံး မီးမျှင်မျှင်နဲ့ ပြုတ်ပေါ့ ။
နောက်ပြီးတော့ဝက်အူပြုတ်။
သူက ၂ မျိုးပြုတ်တယ်။ တစ်မျိုးက ဝက်အူထဲကို ဝက်အတွင်းကလီစာ အသား အဆီတွေကို နှုပ်နှုပ်စင်း စပါးလင် ဂျင်း စတဲ့ အမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့ရောထည့် ပြီး ပြုတ်တာ။
ဝက်အူထဲကို ကောက်ညှင်းထည့် ပြီး ပြုတ်တာ။
ဝက်အူအတွင်းပိုင်းကိုတော့ဆားတွေဘာတွေနဲ့အသေအချာနယ်ပြီးဆေးပေါ့ ။
ဒါက မြောက်ပိုင်းတီးတိန် တွန်းဇံနယ်ဖက်က လူတွေက လုပ်ကြတယ်။
ချင်းပြည်က အေးတော့အစားအသောက်စားကြတဲ့ အခါ ပူပူနွေးနွေးပဲ စားကြတယ်။
ဟင်းအရည်သောက်ကို နှစ်သက်ကြတယ်။ အအေးကို အံတုဖို့ ဟင်းရည်ပူပူကို သောက်ကြတယ်။
ဂျူးတွေက.. သူတို့မျိုးရိုးဗီဇ အစဉ်ဆက်တဲ့သူတွေကို လိုက်ရှာ.. အစ္စရေးပြည်မှာ အခြေချဖို့ကူညီခေါ်လေ့ရှိတယ်..။
အဲဒါ… ချင်းတွေ ထောင်ချီခေါ်သွားတယ်လို့ သတင်းထဲတွေ့ဖူးတာပဲ..။
ဂျူးဆိုတာ အင်မတန်”ထက်”တဲ့ အမျိုး…။ ဆိုတော့.. သူတို့ဗီဇသာပါရင်.. ထက်ကြမှာသေချာ..။
လွန်ခဲ့တဲ့.. အနှစ်၂၀လောက်.. ချင်းပြည်မှာ.. ဒေါ့ကျုမန့်ထရီရိုက်ပြီး.. NHK ( ဂျပန်အစိုးရတီဗီ) ကိုသွင်းတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်..။
ချင်းမလေးတယောက်တောင်ပေါ်ကနေ.. ရေခပ်ဆင်းတာ ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး.. .. ချင်းမလေးက.. ဂျပန်မနဲ့တူတယ်..တူတယ်နဲ့.. ကိုယ်ရွှေဂျပန်တွေ ပြောတာ… လှလည်းလှ.. တုတ်လဲတုတ်..။ ခြေသလုံးပြောပါတယ်.။